समाचार - बच्चाहरूको रेनकोट किन्नुहुँदा तपाईंले केमा ध्यान दिनुपर्छ?
हामी वयस्कहरू जहिले पनि यात्रामा छाता बोक्दछौं। छाता केवल छाया मात्र हो, तर वर्षालाई पनि रोक्न सक्छ। बोक्न सजिलो हाम्रो यात्राको लागि एक आवाश्यक चीज हो, तर कहिलेकाँही बच्चाहरूलाई छाता समात्न त्यति सजिलो हुँदैन। बच्चाहरूलाई बच्चाहरूको लागि रेन्कोट लगाउनु आवश्यक हुन्छ। बजारमा बच्चाहरूका रेनकोटहरू थुप्रै प्रकारका छन्। बच्चाहरूको रेनकोटहरू किन्नुहुँदा हामीले केमा ध्यान दिनुपर्दछ? निम्न Foshan रेनकोट उत्पादकहरूले संक्षिप्तमा तपाईंलाई बच्चाहरूको रेनकोट किन्नुहुँदा ध्यान आवश्यक पर्ने कुराहरु बताउनेछन्!
१. बच्चाहरूको रेनकोटको सामग्री
सामान्यतया भन्नुपर्दा, बच्चाहरूको रेनकोटहरू पीवीसी सामग्रीले बनेका हुन्छन्, र उत्तम रेनकोटहरू पीभीसी र नायलनले बनेका हुन्छन्। जेसुकै सामग्री जस्तोसुकै भए पनि हामीले यसलाई खरीद पछि कायम राख्नुपर्दछ, ताकि रेनकोट लामो समय सम्म टिक्न सक्दछ।
२ बच्चाहरूको रेनकोट आकार
बच्चाहरूको रेनकोटहरू खरीद गर्दा, हामीले आकारमा ध्यान दिनै पर्छ। केही अभिभावकहरूले बच्चाहरूको रेनकोट ठूलो हुनुपर्छ भनेर सोच्न सक्छन् कि तिनीहरू लामो समयसम्म तिनीहरूलाई लगाउन सक्दछन्। वास्तवमा, बच्चाहरूको रेनकोटहरू धेरै ठूला हुन्छन् र राम्रो हुँदैन, र केटाकेटीहरूलाई हिंड्न ल्याउँदछ। असुविधा, बच्चाहरूलाई रेनकोट किन्नको लागि उत्तम हो रेन्कोट किन्नु भन्दा उनीहरू अधिक फिटिंग रेन्कोट किन्न सक्छन्।
Any. कुनै अजीब गन्ध छ?
बच्चाहरूको रेनकोटहरू खरीद गर्दा अद्भुत गन्ध छ भने गन्ध छ। केही बेइमान व्यवसायहरूले बच्चाहरूको रेनकोटहरू बनाउन अयोग्य सामग्रीहरू प्रयोग गर्दछ। त्यस्ता बच्चाहरूको रेनकोटहरूमा तीब्र गन्ध हुन्छ। , किन्नुहोस् यदि त्यहाँ अनौंठो गन्ध छ।
चार, ब्याकप्याक रेनकोट
बच्चाहरूको रेनकोट खरीद गर्दा, स्कूलब्यागको लागि खाली ठाउँसँग रेनकोट पछाडि छोडिन्छ। बच्चाहरूले सामान्यतया स्कूलब्याग बोक्नु पर्छ। तसर्थ, जब बच्चाहरूको रेनकोट खरीद गर्नुहुन्छ, तपाईंले पछाडि बढी ठाउँको साथ रेन्कोट किन्नुपर्दछ।
पाँच, बच्चाहरूको रेनकोट रंगीन छन्
बच्चाहरूको लागि रेन्कोट किन्नुहुँदा, रेन्कोट किन्नुहोस् उज्जवल रंगमा, ताकि टाढाका ड्राइभर र साथीहरूले उनीहरूलाई देख्न सक्दछन् र ट्राफिक दुर्घटनाबाट बच्न सक्छन्।